Japana · Avrily, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Japana · Avrily, 2017
Tantara mikasika ny Japana tamin'ny Avrily, 2017
Media sy Fanoratan-gazety 30 Avrily 2017
Sary Instagram Misy ireo Nahandro Japoney Mety Mbola Tsy Fantatrao
Mediam-bahoaka 27 Avrily 2017
Akoho manta, tsironain'ny trondro, aty manta sy ny nahandro Japoney mety tsy fantatrao.
Omany ny Vazelinina sy Tampim-Bavanareo—Fotoanan'ny Sery Izao Any Japana Noho Ny Tsy Fahazakàna Vovobony
Mediam-bahoaka 25 Avrily 2017
Vinavinaina ho ampahefatry ny vahoaka japoney 123 tapitrisa tsy mahazaka vovobony. Nahoana no miverina matetika ny tsy fahazakàna vovobony any Japana ?
Fifindràmonina 21 Avrily 2017
Osaka no Kaominina Voalohany Ao Japana Nankasitraka ny Fitaizan'ny Pelaka
Lalàna 19 Avrily 2017
“Raha tianao mihoatra ny rehetra ireo ankizy taizanao, na ray aman-dray iana na reny aman-dreny na ray aman-dreny, ny zava-dehibe dia ny maha raiamandreny”.
Ady & Fifandirana 12 Avrily 2017
Noho ny tsingerintaona faha- 72 taonan'ny ady tao Okinawa, nanoratra karazana lahatsoratra tao amin'ny Twitter ilay mpikaroka Japoney, Hidenori Watanave, izay mampiseho sary tahiry tamin'ny ady ary nolokoina tamin'ny fampiasana fitaovana rindrambaiko.
Enintaona Taty Aorian'ny Voina : Manao Ahoana ny Fanarenana an'i Fukushima, Miyagi ary Iwate
Mediam-bahoaka 07 Avrily 2017
Tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa 2017, noraketin'ny Kahoku Shimpo, gazety Japoney mpivoaka isan'andro mitatitra ny avaratra atsinanan'i Japana, ny fivoarana vita nandritra ny enintaona farany tamin'ny fanarenana ny fiainan'ny mponina niharan'ny "loza telo soson'ny" taona 2011 nahitana fihovitrovitry ny tany goavana, tsunami ary ny loza noklearin'i Fukushima.